Fifanandrinana tamin’ny dahalo 40 lahy… : maty voatifitra ilay zandary, very ny basy Kalachnikov | NewsMada
Fifanandrinana tamin’ny dahalo 40 lahy… : maty voatifitra ilay zandary, very ny basy Kalachnikov
Nisy fifandonana mahery vaika, omaly maraina, teo amin’ny zandary sy ny dahalo, eo amin’ny 40 lahy eo ho eo, tany Betroka. Zandary (adjudant chef) iray no lavo, maty voatifitra. Lasan’ireo dahalo ny basiny, Kalachnikov, iray.
Notafihina dahalo manodidina ny 40 eo tany amin’ny fokontany Analamary Betroka, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora maraina. Maty voatifitra tamin’izany ny zandary iray mitondra ny grady adzida sefo. Lasan’ireo dahalo ny Kalachnikov nampisain’ity zandary ity. Taorian’ny fanafihana tao amin’ny fokontany Analamary no nanao fanarahan-dia ny zandary vitsivitsy sy ny fokonolona. Nafana ny fifandonana teo amin’ny roa tonta ka tamin’izany no nahavoatifitra ilay zandary teo amin’ny tratrany ka nitarika ny fahafatesany. Be noho ny vitsy ny zandary nanara-dia ka izay nahavoa ilay zandary io. Fantatra fa nisy dahalo iray ihany koa maty, ary ny iray tamin’ny fokonolona naratra.
Nidina tany an-toerana nanao haza-lambo avy hatrany ny zandary sy ny tafika avy amin’ny taorian’ity zava-nitranga ity. Voalaza fa nisy ny fandefasana helikoptera nanampy ireo nanenjika dahalo.
« Ny alin’ny alarobia 28 jona no nanafika tao Bekijoly, anatin’ny kaominina Analamary Betroka ireo dahalo manodidina ny 40 nirongo basy. Lasan’izy ireo ny omby 119. Tamin’ny 4 ora vao nandre ny zandary tao Betroka ka nanao ny fanarahan-dia ireo dahalo. Nizara roa ireo zandary niaraka tamin’ny tafika ka samy namonjy ny kizo mety ho lalovan’ireo dahalo”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny vondron-tobim-paritry ny zandarimaria Anosy, ny kolonely Ranaivoarison Théodule .
Nifandona tamina kizo iray ny dahalo sy ny mpanara-dia, saingy tafaporitsaka ihany ireo olon-dratsy. Nisy fifandonana ihany koa tany amin’ny kizo faharoa, tany Antsahanivato nandritra izany. Namonjy ireo namany tany amin’io kizo faharoa io ireo zandary taty aoriana noho ny fahafantarana fa mafy ny fifampitifirana. Tsy tratra intsony ireo dahalo fa efa tafatsoaka. Ny fatin’ilay zandary adzida sisa novatanin’ireo namany.
Nilatsaka ny Usad
Fantara fa omaly atoandro ihany, nilatsaka tany an-toerana ny zandary sy tafika nihodidina ny faritra heverina fa itobian’ireo dahalo. Niditra an-tsehatra ny Usad na ny vondron’ny zandary nofanina manokana hiady amin’ny dahalo. Nanampy ihany koa ireo zandary avy any Taolagnaro notarihin’ny lehiben’ny vondron-tobim-paritry ny zandarimaria Anosy, ny kolonely Ranaivoarison Théodule.
Mihevitra ny hahita vokatra ireto andiana zandary sy tafika marobe ireto. Hetsika izay somary tara ihany nanoloana ny fahafatesan’ity zandary ity indray. Mazàna efa aorian’ny asan-dahalo vao mahazo antso ireo, izay vao mihetsika. Fantatra rahateo ny tsy fahampian’ny fitaovana sy ny isan’ireto zandary miady amin’ny dahalo (Usad) ireto. Natao hiady amin’ny dahalo kanefa angatahin’ny olona ny mba hihetsehan’izy ireo toy ny fanaovana fisafoana tsy tapaka amin’ny toerana be dahalo. Mety ho tanteraka anefa ve izany, hoy ny maniry izany mafy.